May 4, 2018 - TV Annapurna
सकियो यातायात व्यावसायीको आन्दोलन , शनिबार गाडी चलाउने
May 4, 2018 May 4, 2018 TV-Annapurna
यातायात व्यवासायीको आन्दोलनप्रति सरकारले आक्रमक भएपछि व्यवासायीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन । सरकारले सिन्डिकेटविरुद्ध अभियान छेड्ने निष्कर्षसहित व्यासायीमाथी धरपकड बढाएपछि आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरु पछि हटेका हुन । शुक्रबार आफ्ना नेताहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि शनिबारबाटै यातायात सञ्चालन गर्ने निचोडमा पुगेका छन । यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मूल समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भोलिबाटै देशभरको यातायात सुचारु गर्न एक बिज्ञप्ती जारी गदै सम्पुर्ण समितिहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।
ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारी चढेको गाडी दुर्घटना २ को मृत्यु ६ घाईते
ग्लोबल आईएमई बैकका कर्मचारी बोकेर कैलालीबाट लम्कीतर्फ गइरहेको गाडी दुर्घटनामा परेको छ । शुक्रबार नेपालगंज जादैं गरेको बा १७ च १२१७ नम्बरको गाडी दुर्घटना हुदाँ २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाईते भएका छन् । बर्दियाको औरी भन्ने स्थानमा दुर्घटना हुदाँ २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाईते भएको बर्दिया प्रहरीले जानकारी दिएको छ । मृत्यु हुनेमा म्याग्दीका राम हमाल र कञ्चनपुरका भुवन पन्त छन्। दुर्घटनामा घाईतेहरुको अहिले मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचार भईरहेको छ । प्रहरीका अनुसार घाईतेको अवस्था गम्भिर छ । .
विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकमाथि सिके राउत समूहको आक्रमण
May 4, 2018 May 4, 2018 Annapurna TV
अनिल पोखरेल, सप्तरी । विपी पब्लिक स्मारक माध्यमिक विद्यालय भारदहका शिक्षक लेखनाथ कोइराला माथि सिके राउतका कार्यकर्ताले हातपात गरेर घाईते बनाएका छन् । कोइरालाको भारदह अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ । शुक्रबार विहान विद्यालय शुरु हुनासाथ सिके राउतका कार्यकर्ता शंकर भन्ने ज्ञानेन्द्र खड्काले कोइरालामाथि हातपात गरि घाइते बकनाएका हुन् । कोइरालालाई शिक्षकहरुले अस्पताल पुर्याएका थिए । उपचार गरिरहेको ठाउँमा समेत आएर खड्काले नेपालीमा हैन मैथिलीमा पढाउनु भन्दै धम्कि दिएको कोइरालाले बताए । राउतले तराई मधेसमा भूमिगत गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ‘विहान विद्यालय शुरु भएको केही बेरमा आएर हेडसर खै…
काठमाडौंमै छ ग्यासको कुवा, यसरी हुदैँछ परीक्षणको तयारी
May 4, 2018 May 6, 2018 TV-Annapurna
शर्मिला सुबेदी , काठमाडौँ । काठमाडौं टेकुको भैरव मन्दिर नजिकै रहेको कुवामा ड्रिलिङ सकाएर परीक्षणको तयारी हुँदैछ । यो सँगै वातावरण विभाग परिसरमा रहेको प्राकृतिक ग्याँसको अर्को कुवाको उत्खननका लागि ठेक्काको काम अघि बढेको हो । उत्खननबाट काठमाडौंमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भाव्यता पत्ता लाग्नेछ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले ‘घर(घरमा पाइप लाइनबाट ग्यास दिने’ सपना यसैका आधारमा बाडेका थिए । यदि ग्यासको परीक्षणबाट उत्पादन सम्भाव्यता राम्रो भेटिए र आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा योग्य देखिए उत्पादन योजना अगाडि बढ्नेछ भने नदेखिए स्थगित हुनेछ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार ग्यास प्लान्टबाट राम्रो उत्पादन भइरहेको…
सिन्डिकेटविरुद्धको आन्दोलनः देशभरबाट ७३ यातायात व्यवसायी पक्राउ(सूची सहित)
सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको विरोधमा रहेका यातायात व्यवसायीको शुक्रबारको आन्दोलनमा थुप्रै पक्राउ परेका छन् । साँझसम्म गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार देशभरबाट ७३ जना यातायात व्यवसायी पक्राउ परेका छन् । आफ्ना गाडी ग्यारेज र घरमा थन्काएर सेवा बन्द गरेका यातायात व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको निर्देशनमा देशभरका ७७ वटै जिल्लामा यातायात सेवा बन्द गर्ने्विरुद्ध कदम चालिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार सरकारले वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरेको थियो । सरकारले यातायात…
मेयर गोल्डकपको उपाधि खाँदबारीले जित्यो
May 4, 2018 Annapurna TV
संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकामा सम्पन्न एक नम्बर प्रदेश स्तरीय चैनपुर मेयर कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधी खाँदबारी नगरपालिकाले जितेको छ। शुक्रबार भएको फाइनल खेलमा पाँचखपन नगरपालिकालाई १–० गोलको अन्तरले पराजित गर्दै खाँदबारीले उपाधी हात पारेको हो। खेलको पहिलो हाफको २९औं मिनेटमा अजय मार्टिनले गरेको गोलले नै खाँदबारीलाई जित दिलाएको हो। पाँचखपनले पनि पटक–पटक गोल गर्ने अवसर पाए पनि अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा उपविजेतामा चित्त बुझाउनु परेको छ। उपाधि जितेसँगै खाँदबारी नगरपालिकाले ट्रफी, मेडल र नगद तीन लाख तीन हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता पाँचखपन नगरपालिकाले पनि ट्रफी, मेडल…
नयाँ बसपार्कबाट समितिका सबै काउन्टर हटाउन निर्देशन
सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीविरुद्ध कडा देखिएको सरकारले नयाँ बसपार्कमा सञ्चालनमा रहेका यातायात संघ तथा समितिका सबै काउन्टर बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यातायात मन्त्रालयको निर्णय अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई काउन्टर खाली गराउन निर्देशन दिएको हो । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अत्यावश्यक सेवमा हड्ताल गरेर सरकारलाई असहयोग गरेका समितिहरुको काउन्टर बसपार्कबाट हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । निर्णयअनुसार अब नयाँबसपार्कभित्र कम्पनीका बसहरुको मात्रै काउन्टर सञ्चालन हुनेछ । काउन्टर हटाउन लोत्सेले प्रहरी सुरक्षा मागेको छ । त्यसअनुसार गृहमन्त्रालयले बसपार्कको सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ…
कांग्रेस पदाधिकारीमा चुनाव हारेका निधि, खड्का र महत मनोनित,पौडेल समूहको विरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आज बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले रिक्त पदाधिकारी मनोनित गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको कांग्रेसका निवार्चित पदाधिकारी एवं सदस्यको बैठकले पदाधिकारी मनोनित गरेको हो । बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्तवा गरेबमोजिम उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्ण बहादुर खड्का र सह–महामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत गरि तीन जनालाई आज पदाधिकारीमा मनोनित गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार ऋषि धमलालाई जानकारी दिए । बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी मनोनयनका लागि नाम प्रस्ताव गरेको र कार्यसमितिबाट त्यसलाई अनुमोदन गराईएको थियो । विधानको दफा २१ मा ८५…
राजनीति, समाचारLeaveacomment
अध्यागमन ‘अप्रेसन’ : एउटाको राहदानीमा अर्को उड्दै
नेपालको अध्यागमन प्रणालीभित्र मौलाएको ‘सेटिङ’ र त्यसले निम्त्याएको संकट । गृहमन्त्री नियुक्त भएर पदबहाली गरेकै दिन रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पहिलो निर्णय गरे– मुलुकको अध्यागमन प्रणाली सुधार गर्न अध्यागमन नीति बनाउने । १५ फागुन २०७४ मा अध्यागमन नीतिको मस्यौदा गर्न जतिखेर गृहमन्त्री कार्यदल बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दैथिए, ठीक त्यहीबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी भारतीय युवतीलाई हङकङ उडाउन ‘सेटिङ’ मिलाइरहेका थिए । नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी र प्रहरी समेतको मिलेमतोमा दुई युवतीसहित चारजना भारतीयलाई भिजिट भिसामा हङकङ उडाउन लागेको सूचना पाएपछि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुख होमनाथ थपलियाको पहलमा विमानभित्र…
कानूनको प्रयोगमा बदनियत : कसुर एउटा अभियोग अर्कै
एउटा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई नियतवश अर्कै अभियोग लगाएर अदालतबाट उन्मुक्ति दिलाउने काम कसरी भइरहेको छ ? ‘नक्कली चिकित्सक प्रकरण’ मा प्रहरी, सरकारी वकिल र मेडिकल काउन्सिलका बदनियतपूर्ण कार्यहरूको खुलासा । १५ माघ २०७४ मा प्रहरीले राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट २० जनालाई ‘नक्कली डाक्टर’ भनेर पक्राउ ग¥यो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानपछि उनीहरूविरुद्ध ठगी मुद्दा चलायो । उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोगलाई अदालतले प्रारम्भिक रूपमै गम्भीरतापूर्वक लिएन । थुनछेकको बहस पछि नक्कली भनिएका ती डाक्टरहरू कोही तारेखमा र कोही सामान्य धरौटीमा रिहा भए । यसअघि २०७२ माघदेखि २०७३ भदौभित्र नेपाल…
बिशेष, साताका लोकप्रिय समाचारLeaveacomment